कानूनी उल्झनको बहानामा पूर्वाधार विकासका कामलाई रोक्न नहुने - Darshan Daily
विराटनगर, २३ पुस । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कानूनी उल्झनको बहानामा पूर्वाधार विकासका कामलाई रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीनै तहको सरकार र तिनका निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘वन, वातारणसँग पूर्वाधार विकास निर्माणको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले कानूनी अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूलाई कानूनको सीमा उल्लंघन नहुने गरी विकास निर्माणमा काममा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जुनसुकै सरकार वा निकाय भए पनि तिनले गर्ने विकास यही नेपाल भूगोलभित्र हुने भएकाले सबैले त्यसको एउटा उपभोक्ता आफू पनि हुँ भन्ने ठान्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । ‘जो कोही सरकारले विकास गरोस्, भूगोल त एउटै हो, म पनि त्यसको एक उपभोक्ता हुँ भन्ने ठान्नु प¥यो’ मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि कानूनको आवश्यक संशोधन परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले विकासका नाममा जथाभावी डोजर र बुल्डोजर चलाउने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार योजनावद्ध विकासको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण झारा टार्ने खालको मात्र हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले जथाभावी बाटो बनाउनाले पहाडी क्षेत्रमा भूक्षयको समस्या हुने गरेको तर्फ सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । प्राकृतिक विनास पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइँ सराइको कारण हुन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले विकास प्रकृतिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा ‘पूर्वाधार विकास निर्माण र वन वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरीका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रेवतीरमण पराजुलीले समग्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुख्य समस्याहरू औंल्याउनु भएको थियो । उहाँले विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू जस्तोः सडक, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, सिँचाइलगायतका निकायबीच उचित समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसबाहेकका नापी, मालपोत, वन र स्थानीय प्रशासनसहित सुरक्षा निकायलाई पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्र ठानेर सोहीअनुसारको कार्ययोजनामा जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका क्रममा आउने अवरोध अन्त्यका लागि विकासमैत्री कानूनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा ‘वन, वातावरण र पूर्वाधार विकासबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संखुवासभा जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटले पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको अवस्थाबारे चित्रण गर्नुभयो । उहाँले धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार विकासका काम वन क्षेत्र मासेर गर्ने गरेको प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विकास निर्माणका लागि वन क्षेत्र बाधक भएको भनाइ सत्य नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको छलफल सत्रमा भाग लिदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले पूर्वाधार विकास विपद्का दृष्टिले सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कतिपय भौतिक पूर्वाधारका काम सम्भावित विपद्लाई नहेरी गर्ने प्रवृत्ति भएकाले विपद् व्यवस्थापनसमेतलाई एकीकृत विकासको योजनामा समेट्नुपर्ने धारणा सचिव पराजुलीले व्यक्त गर्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईंले पूर्वाधार विकासका काममा अन्त र निकायबीच हुने समन्वयको जटिलता बारेको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले सडक बनाएपछि खानेपानीको योजना सुरु हुनेजस्ता प्रवृत्तिले जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, प्रदेश लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालालगायतले पूर्वाधार विकास निर्माणका क्रममा हुने गरेका आ–आफ्ना क्षेत्रको अनुभव सुनाउनुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले र स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यका बारे उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सञ्जीवकुमार राईले प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
शुक्रबार, पौष २३, २०७८मा प्रकाशित गरिएको